Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Dalxiiska Sacuudi Carabiya oo Hawl Muhiim ah ka leh Talyaaniga
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Italy War Deg Deg Ah • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Sacuudi Carabiya Warka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Sacuudi Carabiya, Wadashaqeynta Rasmiga ah ee TTG
Sacuudi Carabiya, oo ah guriga dhabta ah ee Carabta, ayaa loo xaqiijiyay inay tahay Waddanka Rasmiga ah ee Khibradda Socdaalka TTG 2021, taasoo sii xoojineysa joogitaankeeda oo ah meesha ugu horreysa ee dalxiiska ee suuqyada caalamiga ah. Munaasabadda Kooxda Bandhigga Talyaaniga waxaa lagu qaban doonaa Xarunta Rimini Expo Center (Talyaaniga) laga bilaabo 13 -ka illaa 15 -ka Oktoobar waana suuqa ugu muhiimsan Talyaaniga ee warshadaha dalxiiska, oo ah goob muhiim u ah kicinta sahayda iyo baahida heer caalami.
Laga bilaabo 13-15ka Oktoobar ee sannadkan, 23 dal ayaa ka qaybqaadan doona Khibradda Socdaalka TTG ee Xarunta Bandhigga Rimini.
Dhacdadan, oo ah tii ugu horreysay ee nooceeda ah tan iyo markii la xiray adduunka sannadkii hore, waxay muujineysaa kalsooni weyn oo ku aaddan dib -u -bilaabidda qayb muhiim ah.
Maamulka Dalxiiska ee Sucuudiga ayaa diiradda saaraya horumarinta iskaashiga lala yeesho la -hawlgalayaasha ganacsiga socdaalka ee adduunka oo dhan si loo ballaariyo gaadhsiinta dalabkeeda dalxiiska.
Munaasabadan ayaa waxaa isugu imaan doona in ka badan 20 dal oo leh Aduunka qaybta ay ka muuqdaan Sucuudiga, Qadar, Marooko, Tunisia, Japan, Thailand, Filibiin, Cuba, Kolombiya, Urdun, Maldives, Seychelles, iyo, Yurub, Slovenia, Croatia, Greece, Norway, Poland, Belgium, Austria, Malta, Ireland, iyo Qubrus.
“Iyadoo adduunku sii wado inuu dib u furmo oo uu safarku si ammaan ah dib u bilaabo, ka-qaybgalkayagii Khibradda Safarka ee TTG wuxuu la jaan-qaadayaa istiraatiijiyadeena caalamiga ah si aan u dhiirrigelino, uga hawl-galno oo aan u beddelno, u soo noolayno dalabyada kala duwan ee Sucuudiga ee hiddaha dhaqanka, goobaha dhaxalka ee heer caalami ah, iyo dhab Marti -gelinta Carbeed, ”ayuu yiri Fahd Hamidaddin, Madaxa Fulinta ee Hay'adda Dalxiiska Sacuudiga (STA)
Fahd Hamidaddin, Madaxa Fulinta ee Hay’adda Dalxiiska Sacuudiga
STA ayaa mas'uul ka ah kor u qaadista wacyiga Sucuudiga oo ah meel loo dalxiis tago. Ururku wuxuu diiradda saarayaa sidii loo horumarin lahaa iskaashi lala yeesho la -hawlgalayaasha ganacsiga socdaalka ee adduunka oo dhan, si loo ballaadhiyo gaadhista dalabka dalxiiska ee Sucuudiga iyo in la wado beddelidda suuqyada ilaha muhiimka ah.
“Sacuudigu wuxuu leeyahay goobo badan oo astaan ​​u ah socdaalayaasha inay la kulmaan, Badda Cas ee qaaliga ah, godadka carabta ee cabsida leh, goobaha hidaha iyo dhaqanka ee hodanka ah, iyo safka xiisaha leh ee dalabyada madadaalada,” ayuu yiri Mr. Hamidaddin. “Hadda oo xuduudahayagu furan yihiin, waxaan rajaynaynaa inaan ku soo dhaweyno booqdayaasha caalamiga ah qalbi furan iyo maskax furan.”
“Waxaa sharaf noo ah ka -qaybgalka Sucuudiga oo ah TTG Partner Country. Ku lug lahaanshaha 23 dal ayaa xaqiijinaya qiimaha suuqa caalamiga ah ee dhacdadeennu u leedahay shirkadaha dalxiiska ee Talyaanigu abaabulay iyo kartida u dhiganta ee iibsadayaasha ajnabiga ah. Afarta dhibcood ee adduunka, laga bilaabo Ireland illaa Seychelles, laga bilaabo Cuba illaa Japan, oo loogu talagalay daabacaadda 2021 ee dhacdada IEG, kalsoonidu waa darawalka aasaasiga ah ee warshadaha dalxiiska caalamiga ah, ”ayuu yiri Corrado Peraboni, Maamulaha Kooxda Bandhigga Talyaaniga.
Mawduuca ugu weyn ee xafladda sannadkan gudaha Talyaaniga is Aamin Ah. Mawduucani wuxuu dhigayaa cilaaqaad dhab ah oo masraxa xarunta kalsoonida wuxuuna na weydiinayaa inaan ka fikirno sida macaamiisha maanta ay u raadsadaan badeecado ka sarreeya dhammaan dammaanad qaadka badbaadada iyo fayoobaanta. Shirkadaha, waxaan, sidaas darteed, ka filaynaa u damqasho, xaqiijin, iyo u dhawaansho, oo ay weheliso ballanqaad xoog leh, oo u arka warshadaha safarka iyo soo dhoweynta safka hore.